Umatshini okhethekileyo osebenzayo we-alloy-iChina abavelisi abaSebenzayo abaSebenzayo, abaxhasi
Inkampani yethu inembali engaphezu kweminyaka engama-60 kwimveliso yentsimbi engenasici. Ngokukhetha izinto ezisemgangathweni ezikumgangatho ophezulu kunye nokwamkela iinkqubo ezinyibilikayo zesigaba sesithathu se-electroslag eziko + lesigaba esinye sokulungisa isithando somlilo, eziko elingena ngaphakathi, eziko lokuvutha eliphakathi kunye nombane wombane + weziko levod, iimveliso zigqwesile kucoceko kwaye ziyafana, zizinzile ekubunjweni . Uthotho lwentambo ye-Bar-wire kunye ne-cab cab ziyabonelelwa.
Ifayibha yentsimbi kunye neemveliso zayo zezezintsha ezisebenzayo izinto ezitsha. Ifayibha ibonakaliswa yindawo enkulu yomphezulu, ukuqhuba okuphezulu kobushushu, ukuqhuba kakuhle kombane, ubhetyebhetye obuhle, ubushushu obuchanekileyo bokumelana ne-oxidation kunye nokumelana okuhle.
I-Fe-Cr-Al thin strip wide Strip eveliswe yinkampani yethu, kwicala lokhetho lokunyibilikisa ingxubevange, yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeferrite, i-ferrochrome, i-aluminium ingot, iyanyibilika nge-electro-slag smelting ephindwe kabini. yokwenziwa kweekhemikhali, ngokwanda kwento yeThulium, ukuxhathisa i-oxidation kunye nobomi be-alloy buphuculwe ngokubonakalayo.
Iimpawu zeLocomotive Braking Resistance zisetyenziswa njengezona zinto ziphambili zokukhwela iinqwelo zombane, iinqwelo zedizili, izitimela zikaloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba, oololiwe abahamba ngesantya esiphezulu; Kwaye iimveliso zineempawu ezigqibeleleyo kunye nokumelana okuphezulu okuzinzileyo, ukumelana ne-oxidation yomphezulu, ukunganyangeki; Ngokuhambelana, anti-ukungcangcazela okungcono, ukunyuka okunganyangekiyo phantsi kobushushu obuphezulu kunokukhawulelana neemfuno zombane wokuqhekeza uloliwe ombane.
Invar 36 ingxubevange, ekwabizwa ngokuba yi-invar alloy, isetyenziswa kwindalo efuna umlinganiso ophantsi kakhulu wolwandiso. Inqaku leCurie le-alloy li malunga ne-230 ℃, ngezantsi kwayo i-alloy yi-ferromagnetic kunye ne-coefficient yokwanda iphantsi kakhulu. Xa iqondo lobushushu liphezulu kuneli iqondo lobushushu, i-alloy ayinabutsalane kunye nokwanda kokulingana kokunyuka. I-alloy isetyenziselwa ukuvelisa iindawo ezinobungakanani obuqhelekileyo kuluhlu lobushushu, kwaye isetyenziswa kakhulu kunomathotholo, izixhobo ezichanekileyo, izixhobo nakwamanye amashishini.
Umbane wesiFudumezi, Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Ukuxhathisa ngombane, Ubushushu Resistant Electrical Wire, Ucingo lokuFudumeza ngombane, Umbane oFudumeza umbane ngombane,